04/01/2011 - 05/01/2011 - သစ်ထူးလွင် (နေ့စဉ်သတင်း) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
by Thant Syn on Wednesday, April 27, 2011 at 11:19pm
မြန်မာ စစ်ခေါင်းဆောင် တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး လက်ရှိ နိုင်ငံ ၏ အမြင့်ဆုံး အာဏာ ကို ရယူ ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး ဟောင်း ဦးသန်းရွှေ သည် ၎င်း ၏ဘ၀ ဖြစ်စဉ် အား မြန်မာနိုင်ငံ တွင်း ရှိ နာမည် ကျော် စာရေး ဆရာ အချို့နှင့် တိုင်ပင် ပြီး
ရေးသား လျှက် ရှိကာ မကြာမှီ ထုတ်ဝေနိုင်ရန်
AFP/File – Cyclone Nargis which smashed through the southern delta region in May 2008 left an estimated 138,000 …
Saturday, 30 April 2011 01:26
YANGON: A friend of Aung San Suu Kyi has been appointed as an adviser to Myanmar’s president, he said vowing to aid “co-operation” between the democracy icon and the government.
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း သိန်းစိန် အစိုးရအပေါ်သုံးသပ်ချက်နဲ့ ပြည်သူသို့ အသိပေးတင်ပြချက်
Analysis of Ex Gen Government Burmese Version
ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းများ (၂၉-ဧပြီ-၂၀၁၁)
ဒဂုန်တာရာနှင့် လူထုစိန်ဝင်း လက်မှတ်ထိုး
မြန်မာ့အရေး တိဘက်အစိုးရသစ် ဆက်လက်ထောက်ခံ (နှိပ်ရန်)
ဖွံ့ဖြိုးမှု အနည်းဆုံး နိုင်ငံများအရေး ကုလ ဆွေးနွေးမည် (နှိပ်ရန်)
၁၁ ပါတီက ဥရောပသမဂ္ဂကို GSP ပြန်ထားစေလို (နှိပ်ရန်)
ဒဂုန်တာရာနှင့် လူထုစိန်ဝင်း လက်မှတ်ထိုး (နှိပ်ရန်)
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား လွှတ်ရန် မြေအောက် ၁၁ ဖွဲ့ တိုက်တွန်း (နှိပ်ရန်)
စကတ်တိုဖြင့် ကစားမည်ဟု MBF ပြော (နှိပ်ရန်)
မြစ်ကြီးနားမှာ ပယင်း အဝယ်လိုက် (နှိပ်ရန်)
အီးယူ အထွေထွေသက်သာခွင့် ပြန်ရရေး ၁၁ ပါတီ တောင်းဆို(နှိပ်ရန်)
စစ်အစိုးရနှင့် သဘောတူညီချက်များကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပထမဆုံး ထုတ်ဖော်ပြောကြား(နှိပ်ရန်)
မြန်မာ ကွန်ရက်အဖွဲ့ ၁၁ ဖွဲ့က ဦးသိန်းစိန်အစိုးရကို ဝေဖန်ထောက်ပြ(နှိပ်ရန်)
သတ်မှတ်နယ်မြေ မကျော်ဖို့ အပစ်ရပ်အဖွဲ့များကို အစိုးရစစ်တပ်သတိပေး(နှိပ်ရန်)
အိန္ဒိယ-မြန်မာ အဆင့်မြင့် စစ်အရာရှိများ နယ်စပ်ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ(နှိပ်ရန်)
စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုနှင့် မြန်မာအစိုးရ သက်ဆိုင်မှုမရှိဟု အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ပြောကြား(နှိပ်ရန်)
အစိုးရပြောင်းသော်လည်း အုပ်ချုပ်ရေး ပုံစံ မပြောင်း၍ ပြည်သူများ မကျေနပ်(နှိပ်ရန်)
တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်၊ စစ်သားနဲ့အရပ်သားတွေ သေ(နှိပ်ရန်)
မြန်မာ့အရေး ကမ္ဘာ့အရေးတွေကို မူကြိုကနေ ကျောင်းပြန်တက်ကြပါ(နှိပ်ရန်)
အင်အားသုံး ခြိမ်းခြောက်မှုကြောင့် မိုင်းလားတပ်ဖွဲ့ ဒုတိယမြောက်စခန်း ထပ်မံဆုတ်ပေးရ (နှိပ်ရန်)
မုံးလားတပ်စခန်းနေရာ မြန်မာစစ်တပ် ဝင်ရောက်တပ်စွဲ (နှိပ်ရန်)
ကူးတို့ဆိပ်လေလံဦးစီးသည့် မူစယ်စည်ပင်ကို ဒေသခံများ မကျေနပ် (နှိပ်ရန်)
သျှမ်းပြည်ဝန်ကြီးချုပ်ထံ တိုင်တန်းပါက ထောင်ဒဏ် ၇ နှစ်(နှိပ်ရန်)
NDF အကွဲအပြဲ ပြဿနာ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဆုံးဖြတ်မည် (နှိပ်ရန်)
နေပြည်တော် ၀က်ရောင်းဝယ်သူများ တိမွေးကု ထောက်ခံစာယူရန်လို (နှိပ်ရန်)
UMFCCI နှစ်ပတ်လည်တွင် ဥက္ကဌ အဖွဲ့သစ်နဲ့ငွေစရင်းရှင်းတမ်းကြေငြာမည်(နှိပ်ရန်)
မိုင်းလင်းတွင် အသေးစား ငလျှင်များနေ့စဉ်လှုပ်(Click)
နခွန်ဆဝမ် ၊ ဖိကျကွန်း မြို့က စက်ရုံမှာ မြန်မာ အလုပ်သမားတွေ ဆူပူမှု ဖြစ်ပွား(နှိပ်ရန်)
ဒီနေ့ နိုင်ငံတကာသတင်းများ (29 ဧပြီ 2011)
ပရိသတ်ကို နှုတ်ဆက်နေတဲ့ သတို့သမီးကိတ်
ဆီရီးယား ဆန္ဒပြပွဲ စစ်သားတချို့ သေဆုံး(နှိပ်ရန်)
တော်ဝင်မင်္ဂလာမောင်နှံ လူထုကို နန်းတော်လသာဆောင်မှ နုတ်ဆက်(နှိပ်ရန်)
တော်ဝင် မင်္ဂလာပွဲကို မြန်မာတွေလည်း စိတ်ဝင်စား(နှိပ်ရန်)
လူအများ စောင့်စားခဲ့ကြရတဲ့ မင်္ဂလာပွဲနေ့(နှိပ်ရန်)
ဗြိတိန် တော်ဝင်မင်္ဂလာပွဲနှင့် သတို့သမီး အသက် တစ်နှစ်ကြီးတဲ့ ပြဿနာ(နှိပ်ရန်)
တော်ဝင် မင်္ဂလာပွဲကို ကြည့်ဖို့ လူတွေ ညအိပ်စောင့်ကြ(နှိပ်ရန်)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘာသာရေး လွတ်လပ်ခွင့် ပိတ်ပင်နေဆဲ(နှိပ်ရန်)
NewsNow:(Myanmar) 29 April 2011
Myanmar seeks help in military training(Click)
Myanmar reports outbreaks of PRRS in Naypyidaw region(Click)
Thai PTTEP to end exploration in Myanmar's Block M4 (Click)
Myanmar and China to build cross-border railway link (Click)
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် နိုပိုး-ဒုက္ခသည်စခန်းသို့ အလည်တခေါက်
Photos from Nu Po and Umpiem Mai in Thailand
ဒီခရီးနိးသလား- ၇-နာရီကြာ ကား ၂-ဆင့်စီးရသည်-
မြန်မာအတိုက်ခံတွေအများစုအခြေစိုက်ရာ မဲဆောက်မြိုရဲ့မြောက်ဖက် ၇-နာရီလောက် လိုင်းကား ၂-ဆင့်စီးပီးသွားရတဲ့ နိုပိုးစခန်းခရီးစဉ်ဟာ ကျနော်အတွက်တောာ့ အသစ်အဆန်း ခရီးတခုပါဘဲ့။ ဒီခရီးလမ်းရှိ အုန်းဖျန်ဒုက္ခသည်စခန်းအပါဝင် နယ်စပ်တကျောက ဒုက္ခသည် စခန်း တဒါဇင်နီးပါးခန့်ကို လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀-ကျော်အတွင်း ကျနော်ရောက်ခဲ့ဖူးပီးဖြစ်ပေမဲ့ နိုပိုး ကိုတော့
Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the alignment of...
ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းများ (၂၈-ဧပြီ-၂၀၁၁)
တော်ဝင်မင်္ဂလာပွဲ နဲ့ မြန်မာတော်ဝင်များ(နှိပ်ရန်)
လွှတ်တော်၏လုပ်ပိုင်ခွင့်ချဲ့ထွင်ဖို့ စိစစ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ပြောကြား(နှိပ်ရန်)
လူထု အခြေပြု သဘာဝဘေးဒဏ် စီမံခန့်ခွဲမှု တာလေမြို့နယ်မှာ ပြုလုပ်(နှိပ်ရန်)
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာန ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့် အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်(နှိပ်ရန်)
မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီရေးထောက်ကူမည့် ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုး အီးယူ ချမှတ်စေလို(နှိပ်ရန်)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အမေရိကန် အမျိုးသမီးအဖွဲ့ ဂုဏ်ပြု(နှိပ်ရန်)
မြန်မာကို ကုန်သွယ်မှု သက်ညှာခွင့် ပြန်ပေးဖို့ ပါတီတွေ တိုက်တွန်း(နှိပ်ရန်)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘာသာရေး လွတ်လပ်ခွင့် ကင်းမဲ့(နှိပ်ရန်)
ထူး နဲ့ ဦးပိုင် က လယ်သိမ်းပြီး တရားစွဲမှု စွဲချက်တင်(နှိပ်ရန်)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ အကြံဥာဏ်များရယူသွားမည်ဟု သမ္မတအကြံပေးပြော(နှိပ်ရန်)
ထိုင်းရောက် တရားမဝင် လုပ်သားများ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုပြီ (နှိပ်ရန်)
နေမျိုးဇင် ဖမ်းဆီးမှု ဥပဒေနှင့်ညီရန် AHRC ပြော (နှိပ်ရန်)
ထိုင်း စက်ရုံဝန်ထမ်းများနှင့် မြန်မာများ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ် (နှိပ်ရန်)
ဓာတ်ဆီ မှောင်ခိုဈေးကွက် ပိုအလုပ်ဖြစ်လာ (နှိပ်ရန်)
ဈေးစည်ပင်ကြောင့် သီရိမင်္ဂလာဈေးသစ် ဆိုင်ခန်းရှင်များ အခက်ကြုံ (နှိပ်ရန်)
တရားမ၀င် တပတ်ရစ်ကား တင်သွင်းမှု များပြားလာ (နှိပ်ရန်)
မြန်မာအထည်ချုပ်စက်ရုံနှင့် မြန်မာအလုပ်သမား ပြဿနာ အလုပ်သမားရုံသို့ရောက်(နှိပ်ရန်)
ဒီနေ့ နိုင်ငံတကာသတင်းများ (28 ဧပြီ 2011)
ပါလက်စတိုင်း နဲ့ အစ္စရေး ငြိမ်းချမ်းရေး(နှိပ်ရန်)
ဆီးရီးယား ဆန္ဒပြပွဲ လူ ၅၀၀ ကျော် သေဆုံး(နှိပ်ရန်)
NewsNow:(Myanmar) 28 April 2011
Myanmar, China agree to build rail link to seaport(Click)
Myanmar, China agree cross-border rail project(Click)
China construirá en Myanmar ferrocarril hasta puerto del Indico(Click)
AFP – Former Burmese soldier
turned pro-democracy activist Myo Myint
speaks at the US State Department
in Washington, …
Authorities in Yangon have
banned plastic bags, state media
said on Tuesday, in an attempt
to stop non-degradable waste
polluting Myanmar's main city.
ရာသီဥတု အပူချိန်ကြောင့် ပြင်ဦးလွင်ရှိ အနီးစခန်းရေတံခွန်၊ ပွဲကောက်ရေတံခွန်၊ ပိတ်ချင်းမြောင်လိုဏ်ဂူ ရေတံခွန်တို့ ရေနည်းပါးလာ(နှိပ်ရန်)
ရပ်ကွက်များ အတွင်းရှိ ဈေးဆိုင်များတွင်ပါ ကြွပ်ကြွပ်အိတ်၊ ကြွပ်ကြွပ်အိတ်ကြိုးများ ရောင်းချခြင်း မပြုရန် သက်ဆိုင်ရာမှ အကြောင်းကြား(နှိပ်ရန်)
အကျဉ်းစံ သံဃာ့အရေး သာသနာ့နုဂ္ဂဟ ကြိုးပမ်းသင့် (နှိပ်ရန်)
ပုဂ္ဂလိက ဓာတ်ဆီဝေပုံသစ် မကျေနပ်ကြ (နှိပ်ရန်)
တောင်သူလယ်သမားကို မြှင့်တင်ပေးရန် ဒေါ်စု ပြော (နှိပ်ရန်)
ဝ ပြည်၌ အကောက်ခွန်ဈေးနူန်း လျှော့မပေးသေး လုပ်ငန်းရှင်များအခက်တွေ့ (နှိပ်ရန်)
ငလျင်ဒဏ်သင့်ဒေသ လူထုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကုသမှု အထူးလိုအပ်ဟု - SNLD ပြော(နှိပ်ရန်)
နကသ ရဲအရာရှိတစ်ဦး ဓါးခုတ်ခံရ(နှိပ်ရန်)
သမ္မတ အကြံပေးအဖွဲ့ ဖွဲ့(နှိပ်ရန်)
Is Myanmar At A Crossroads?(Click)
Myanmar president calls for measures in border areas development (Click)
မင်းသားဝီလျံ နဲ့ ကိတ်မစ်ဒယ်တန် တို့ရဲ့မင်္ဂလာသတင်းအပြည့်အစုံ(နှိပ်ရန်)
အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ထိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ် သွားမယ့် အစီအစဉ်ဖျက်(နှိပ်ရန်)
အာဖဂန် ထောင်ဖောက်မှုအတွင်း အကျဉ်းသား ၄၀၀ ကျော် ထွက်ပြေး(နှိပ်ရန်)
မီးရှို့သတ်သေတဲ့ တိဘက်ရဟန်းငယ်ကို အာရပ် စတိုင် မတည်ငြိမ်မှု လုပ်သည်ဟု တရုတ်စွပ်စွဲ (နှိပ်ရန်)
အရှေ့တီမောကို ကမ္ဘာ့ဘဏ် ကူညီမှုများ မအောင်မြင် (နှိပ်ရန်)
စစ်သင်တန်းကြောင့် ချင်းလူငယ်များ နယ်စပ်သို့ ထွက်ပြေးနေ(နှိပ်ရန်)
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် ပေးစာ NLD ထုတ်ပြန်
ကိုလွဏ်းဆွေ ရဲ့ အားလုံးပဲဟောင်းနွမ်းလွန်းလို့ အသစ်ကပြန်စကြစို့ ဆိုတဲ့ဆောင်းပါး အပိုင်း(၁)(၂)(၃) ကို သေချာဖတ်ကြည့်တော့ ချဲ ဂဏန်းထွက်ပြီးမှ တွက်နည်းပေါင်းစုံနဲ့ မမှန်မှန်အောင် တွက်ပြနေ သလို ပါပဲ။
အင်အယ်လ်ဒီ ဦးဆောင်မှု့ကဏ္ဍ ကို ဝေဖန်တိုက်ခိုက်ရေးသားနေပုံတွေကို ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ န၀တ၊ နအဖ ခောတ် တလျှောက် သတင်းစာတွေ မှာ ဒီဆောင်းပါးနဲ့ပုံစံတူဆောင်းပါးတွေရေးသားခဲ့တဲ့ မအူပင်ခြင်ကြာ ၊ ပေါက်စ၊ ငါးမင်းဆွေ စတဲ့ ဆောင်းပါးရှင်တွေရဲ့ အာဘော်တွေနဲ့ ထပ်တူ ဖြစ်နေတာ ကို တွေ့ရတယ်။
ပြည်ပသတင်းဌာနတွေ ဘာ့ကြောင့် ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင်နဲ့ Myanmar Egress က အန္တရာယ်ကြီးမှန်းသိရက်နဲ့ နှာစေးနေကြတာလဲ
စစ်အစိုးရဖြစ်စေချင်တဲ့လမ်းကြောင်းကို နိုင်ငံတကာ အထောက်အပံ့အဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာယူပြီး အကောင်အထည်ဖော်ပေးနေတဲ့ ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင်နဲ့ Myanmar Egress ဟာ တိုင်းပြည်မှာ အန္တရာယ်အလွန်ကြီးမှန်း
သိပေမယ့်။ BBC. VOA. RAF. DVB. Irrawaddy. Mizzima သတင်းဌာနတွေဟာ သူတို့အကြောင်း သေချာစုံစမ်းသတင်းရေးသားတာမလုပ်ဘဲ နှာစေးနေကြပါတယ်။ ဒါဟာ ဘာ့ကြောင့်လည်းဆိုရင်တော့ အဲဒီသတင်းဌာနတွေမှာ လုပ်ကိုင်နေသူတော်တော်များများဟာ နေ၀င်းမောင်တပည့်တွေချည်းဖြစ်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
နေ၀င်းမောင်ဟာ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်ကျော်ကျော်ကတည်းက သူ့ရဲ့ တပည့်တွေကို
Wednesday, 20 April 2011 18:30 Laila de Champfleury
Rangoon (Mizzima) - The Lady is notarevolutionary. The heroine of the Burmese pro-democracy movement sat calmly, hands lightly clasped together on the table, talking to her guests who had come to quizz her about her politics and Burma’s troubled road to democracy.
Aung San Suu Kyi said, surprisingly, that she thinks revolutions are ‘not very romantic’.
Aung San Suu Kyi withagroup of Danish students and teachers at the NLD office in Rangoon in early April, 2011. Photo: Laila Felicia Lautrop Pichot de Champfleury
Friday, 22 April 2011 07:59 Line Skovlund Larsen
(Feature) – The sun was up high in the sky when our group of Danish students and teachers walked into the People’s Park in Rangoon to chat about the many meetings we had had over the previous few days.
We took out our notebooks, sat down inacircle on the grass and started talking and writing, trying to ignore the heat.
After meeting Aung San Suu Kyi, the group of Danish students
I was traveling withagroup of 11 students and two teachers from my Danish folk high school with our focus on international politics.
၀င်ငွေနည်းမိသားစုတွေအတွက် လျှစ်စစ်မီးခ အခမဲ့ပေးတာကို ကုမ္ပဏီတွေ စိတ်မပါ(နှိပ်ရန်)
အစိုးရသစ် လုပ်ပိုင်ခွင့်အပေါ် NLD ဝေဖန်(နှိပ်ရန်)
ရှမ်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို ရှမ်းNLD ကကူညီ(နှိပ်ရန်)
မြန်မာကို အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌရာထူးအတွက် လက်မခံလိုဟု အမေရိကန် ပြော (နှိပ်ရန်)
နိုင်ငံရေး မငြိမ်သက်မှု သတိရှိရန် တပ်တွင်းညွှန်ကြား (နှိပ်ရန်)
အဓမ္မ ပိတ်လှောင် အလုပ်ခိုင်းခံရသူများ လွတ်မြောက် (နှိပ်ရန်)
သစ်ထူးလွင် (အသံဖိုင်နဲ့ဆောင်းပါး) April/19/2011
ကြံ့ဖွံ့အစိုးရရဲ့ 2011-2012 နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက် မှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးအသုံးစရိတ် ၅ ရာခိုင်နှုန်း သာရှိပြီး စစ်တပ်အသုံးစရိတ်က ၂၄ ရာခိုင်နှုန်းထားရှိပါတယ်။ စစ်အစိုးရအဆက်ဆက် လစ်လျူရှုခဲ့ လို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပညာရေး ပျက်စီးယိုယွင်းမှု့တွေကိုလည်း အားလုံးအသိပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပြည့်သူ့ ကျန်းမာရေးအတွက် တနှစ်သုံးစွဲငွေဟာ ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန တနှစ် သုံးစွဲငွေရဲ့ ၉ ရာခိုင်နှုန်း ကျော်သာ ရှိတာကြောင်း၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ကဏ္ဍမှာ ချွတ်ယွင်း
ခေါင်းလျှော်ကာ တရော် ကင်ပွန်းရယ်နဲ့
ဧပြီ ၁၆၊ ၂၀၁၁
“ခေါင်းလျှော်ကာ တရော် ကင်ပွန်းနဲ့
သပြေခက်နဲ့ ရေပက်၊ မကြည်အောင်
တရော်ကင်ပွန်းနဲ့ခေါင်းလျှော်တယ်ဆိုတာ မြတ်နိုးစရာ မြန်မာ့ရိုးရာဓလေ့တခုပါပဲ။ ရှေးအခါတုန်းက ယောက်ျားတွေမှာ ရောင်ထုံး၊ မိန်းမတွေမှာ ဆံထုံးကို အထွတ်အမြတ်ထားကြတော့ မြန်မာ့ရိုးရာမှာ ခေါင်းလျှော်တဲ့
ချင်းတွင်းမြစ်ကြောင်း တစ်နေရာအား ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ အတွင်းက တွေ့ရစဉ်
ချင်းတွင်းမြစ်ရေသည် ရေနည်းသတိပေးမှတ် အောက်သို့ရောက်ရှိနေကြောင်း မိုးလေ၀သနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ သတင်း ရရှိပါသည်။
ချင်းတွင်းမြစ်ရေသည် မုံရွာမြို့တွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဧပြီလ ၄ ရက်နေ့ တိုင်းထွာချက်များအရ